Ukumaketha kwe-YouTube: Kungani Kusesemqoka! | Martech Zone
Sibambe umhlangano wesifunda wabadlala podcast ehhovisi lethu ukuxoxa ngokwanda kwamavidiyo kwi-podcasting. Kwakuyizingxoxo ezingakholeki - kusuka kubuchwepheshe obusha, izinselelo zobuchwepheshe, kuya kumasu wesikhathi sangempela samavidiyo omphakathi. Azikho izingxoxo lapho kubuzwe khona umbuzo, kufanele ngabe senza ividiyo? Esikhundleni salokho bekukhuluma ngokuthi singayisebenzisa kanjani ividiyo ukuze ihambisane nemizamo ye-podcasting ngendlela ephumelela kunazo zonke.
Njenge-podcaster eyodwa, UChris Spangle, Isazi sokuqukethwe komsindo nevidiyo siphendule: I-Youtube ilapho ukuseshwa khona. Iyaqhubeka nokuba yindawo engu- # 2 eseshwe kakhulu ngaphandle kweGoogle uqobo. Akuwona wonke umuntu ofisa ukufunda iposi le-blog noma alalele i-podcast - bafuna ividiyo.
I-YouTube ingumphakathi omkhulu wokwabelana ngamavidiyo emhlabeni. Njengoba kunezigidigidi zabasebenzisi nokuqukethwe okusha okulayishwe njalo ngomzuzwana, kuyindawo yamandla yokuzijabulisa eku-inthanethi enezikhathi eziyi-10 ukusetshenziswa kwe-Netflix, i-Amazon Prime ne-Hulu kuhlangene. I-WebpageFX
I-Youtube iqhosha abasebenzisi abangaphezu kwesigidi esisodwa, ngaphezulu kwengxenye yabo bangena ngemvume besuka kuselula. Amavidiyo angaphezu kwezigidi eziyizinkulungwane ezine abukwa nsuku zonke ngesikhathi esimaphakathi sabasebenzisi sikhishwe imizuzu engama-40
I-Youtube nayo inayo izinketho zokusakaza bukhoma futhi amathuluzi omphakathi, enwebayo njengoba isebenza ukuhambisana nokuguquguquka kwamathrendi wabathengi - ngenkathi futhi muva nje bengeze ikhono lokukhomba abasebenzisi ngokususelwa Ukuziphatha kosesho lwe-Google, enye inzuzo ebalulekile. Andrew Hutchinson
I-WebPageFX ikhiqize le infographic, Kungani Izinto Ze-Youtube Zimaketha, futhi inikezela ngamasu ayisishiyagalolunye wokuqinisekisa ukuthi umkhiqizo wakho umelwe kahle ku-Youtube:
Sebenzisa igama lakho lomkhiqizo ku- igama lesiteshi.
Engeza Amagama angukhiye egameni lesiteshi sakho.
Sebenzisa igama elingukhiye izihloko zevidiyo.
Engeza I gama le-brand izihloko zevidiyo.
Faka uphawu njalo kumavidiyo akho nge isingeniso noma ilogo.
Sebenzisa lakho Umbiko Wokugcinwa Kwezithameli.
Update isiteshi sakho se-Youtube njalo.
Khiqiza amavidiyo phakathi Imizuzwana engu-31-60.
Ungahlukıselana amavidiyo akho kuwebhusayithi yakho.
Amavidiyo akhiqizwe kahle anamagama ezethulo, ukukhuluma okucacile, okuningiliziwe okuningiliziwe, okuhlangenwe nakho kobuchwepheshe, ukuhwebelana okumsulwa, ukuboniswa kanjani, nokubizelwa esenzweni okucacile.
Tags: Imidwebokanjani amavidiyoizinguqukoikholi yevidiyo esenzweniikhwalithi yevidiyoizibalo zevidiyoizibalo zevidiyoiwebsiteyoutubeikholi ye-youtube ezenzwenii-youtube ctaamavidiyo ashukumisayo we-youtubeinfographic ye-youtubeukumaketha kwe-YouTubeizibalo ze-youtubeizibalo ze-youtubeisinqumo sevidiyo se-youtube
Sep 7, 2010 ngo-10: 36 PM
Besisebenzisa izichasiselo ezixhumanisayo kumavidiyo kamuva nje http://www.12starsmedia.com. Ngiyavuma ngokuphelele ukuthi ukukwazi ukuxhumanisa amavidiyo, ikakhulukazi kwifomethi yomkhankaso, kuvula amathuba amaningi amahle. Enye yezintandokazi zami engizibonile muva nje ukungena komncintiswano ngumngane wami uSteven Shattuck ku-CMC Media Group. Bheka lapha - http://www.youtube.com/watch?v=7gdbCWikdUY
Sep 8, 2010 ku-7: 26 AM
O izinhlangothi zami !! Yeka ukuqaliswa okuhle! Zama amanye amagama ambalwa anjengokuthi “ukwanga”, “ukwangana”, “ucula no”, “ulwa no” namanye amagama amabi kangako.
Amathuba angapheli adonsela ebuchosheni bami njengamanje! Ugqozi lokuba matasa ngesizinda sami seWebCommercials.biz.